MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 825
>short story by Waso Ko Oo
> ငါးကြင်းခေါင်းဝါဆိုကိုဦး (တောင်ကြီး)မတ် ၉၊ ၂၀၀၉ (၁) ခေတ်ကြီးမှာနေရင် ခေတ်ကြီးရဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကို မျက်ခြေပြတ်လို့မရဘူးဗျ။ သည်လိုအသိမျိုး ရှိဖို့ဆိုတာကလည်း လူတိုင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်မှာက သည်အသိမျိုးရှိတယ်။ ရှိဆို ဗဟုသုတများတဲ့သူကိုး။ အမျှော်အမြင်ကြီးတဲ့သူကိုး။ အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့သူကိုး။ ကျုပ်ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေများတော့ တနေ့တနေ့ မနက်လင်းရင် အိပ်ယာထ၊ ဖရုဿဝါစာတွေနဲ့ မနက်ခင်းကို အိုးမည်းသုတ်၊ စားဖို့ သောက်ဖို့လုပ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ငုတ်တုတ်၊ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်မှာ ငုတ်တုတ်၊ ဟိုလူ့အတင်းတုတ်၊ သည်လူ့အတင်းတုတ်၊ မဟုတ်ကဟုတ်က နိမိတ်တွေကောက်၊ အိပ်မက်တွေပုံဖော်၊ ဂဏန်းတွေနဲ့ ပျော်နေကြတာပဲ။ ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံမနင်းရဆိုတဲ့ စကားပုံကိုမှ ကြားဖူးကြရဲ့လား မသိဘူး။ သူတို့မှာ သားသမီးတွေရှိသလို ကျုပ်မှာလည်း သားသမီး ရှိတာပဲဗျ။ သမီးလေးက (၇)တန်း၊...
> ရှင်သန်နေသည့် သမိုင်းထဲမှ ‘သူတို့တတွေ’လောအယ်စိုးမတ် ၉၊ ၂၀၀၉ ကျနော် အမေရိကန်နိုင်ငံကို ရောက်တဲ့အခါ၊ အစစအရာရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံထက် အဆင်ပြေတာတွေကို ကြုံတွေ့၊ ခံစားရပါတယ်။ သာမန် အခြေခံကိစ္စလေးတွေဖြစ်တဲ့ စားရေး သောက်ရေး၊ သွားရေး၊ လာရေးတွေပါ။ အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စာရင် တကယ့်ကို အလျံအပယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မစားရခဲ့သမျှ ပုဇွန်ထုပ်ကြီးတွေကို ဒီမှာ အတိုးချပြီးတော့ကို စားပစ်လိုက်တယ်။ ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာထဲက အဆိုဖြစ်တဲ့ “နို့နှင့်ပျားရည်၊ စီးဆင်းသောနိုင်ငံ” လို့တောင် ခေါ်ရမလို။ ဒါပေမယ့် ဒီ အမေရိကန်ကန်နိုင်ငံမှာလည်း အခက်အခဲ၊ လူမှုဒုက္ခ၊ စိန်ခေါ်မှု အသစ်တွေ ကလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြဿနာအသစ်တွေကလည်း သမ္မတအသစ် မစ္စတာအိုဘားမား ဖြေရှင်းပေးဖို့ တသီတတန်းကြီး စောင့်နေတယ်။...
> ဆားကစ်စီးတီး နောက်ဆုံးနေ့ ကျော်ကျော်မတ် ၉၊ ၂၀၀၉ နယူးဂျာဆီမြို့ရဲ့ ဆားကစ်စီးတီး(Circuit City) စတိုးတစ်ခုမှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆိုင်ဖွင့်ချိန် ၁၁ နာရီ မတိုင်မီကတည်းက လူအယောက် ၄၀ လောက် အပြင်မှာ တန်းစီစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆိုင်ထဲမှာ ပစ္စည်းအနည်းငယ်လောက်သာ စင်ပေါ်မှာကျန်ပါတော့တယ်။ တချိန်တုန်းက အလွန်အောင်မြင်ပြီး ဆိုင်ခွဲပေါင်း ၅၆၇ ဆိုင်ရှိတဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ကုမ္ပဏီကြီးဟာ အရှုံးပြပြီး ဇန်န၀ါရီ ၁၇ ရက်နေ့ကစပြီး လျှော့ဈေးနဲ့ ရောင်းချခဲ့တာ တနင်္ဂနွေနေ့ဟာ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်ကြောင့် သက်တမ်း ၆၀ နှစ် ရှိခဲ့တဲ့ ဆားကစ်စီးတီးဟာ ယခင်နှစ် နိုဝင်ဘာလကတည်းက ဒေ၀ါလီခံခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီကို ထပ်မံဝယ်ယူမည့်သူလည်း ရှာမတွေ့ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။...
>၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ်
> ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် ပြည်တော်ဝင် – ၀င်းဦး သတင်းနှင့် စံတော်ချိန်သတင်းတီးလုံး ဇစ်မြစ် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုတင်ပါ မြန်မာဝန်ကြီးချုပ် – ခေတ်ပြိုင်အာဘော် သီတဂူဆရာတော် အင်တာဗျူးနဲ့ ဂုဏ်ထူးဝိသေသများ – အာရ်အက်ဖ်အေ နှစ် ၁၅၀ မန္တလေး အဝေးဝေးကပေးစာ – ယာတောကသာဗြော တပတ်အတွင်း အကျဉ်းထောင်တွင်းသတင်းများ ကမ္ဘာတလွှားဖတ်စရာများ မင်းကိုနိုင်တေးနဲ့ မင်းကိုနိုင်အရေး ဗိုလ်အောင်ဒင် – ၃ စီစဉ်သူ – ဦးပန်တျာ၊ ဒေါ်မေရီ No tags for this post. Related posts No related posts.
>the pride of freedom by Tin Moe
> လွတ်လပ်ရေးဂုဏ် တင်မိုးမတ် ၆၊ ၂၀၀၉ (သရုပ်ဖော် ပန်းချီ မျိုးမြင့်) (၁၉၈၆-ခု ဇန်န၀ါရီလထုတ် ရုပ်ရှင်အောင်လံမဂ္ဂဇင်းမှ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရသော ကဗျာ ဖြစ်သည်။) ဆယ့်လေးငါးနှစ်၊ ရွယ်နုမျစ်ကငါချစ်သောရွာ၊ ကန်ဦးမှာလျှင်အောင်ပါစေညွှန်း၊ သပြေပန်းနှင့်တန်းစီ လူထု၊ အလေးပြုလျက်ရုံးစုလက်တွဲ၊ တို့ဆင်နွှဲသည်လွတ်လပ်ရေးပွဲ ခါတော်ဦး။ ယခုခါတွင် အောင်လံတင်၍ကောင်းကင်မိုးဖျား၊ လေကစားကတို့များငယ်ခါ၊ လွတ်လပ်ခါကိုဝမ်းသာပီတိ အောက်မေ့မိခဲ့။ တို့များသားမြေး ခေတ် ကလေးတို့အတွေးအာရုံ စိတ်ကြေးမုံ၌လွတ်လပ်ရေးဂုဏ် ဘယ်သို့ထုံ၍ဘယ်ပုံခံစားကြပါလိမ့်။ ။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Nyan Si – Myit Kyi Nar – 8
> မြစ်ကြီးနား – ၈ ညံစီ မတ် ၈၊ ၂၀၀၉ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ ဈေးကျတယ် လဘက်ရည် တခွက် တရာ့ငါးဆယ် လေးဖြူ လေးသောင်းနဲ့ စတိတ်ရှိုး ဆိုကောင်းတုန်း။ ရေနံဈေး ကျတယ် ဒေါ်လာဈေး ကျတယ် ကားတွေ ဈေးကျတယ် တီဗီတွေ ဈေးကျတယ် ပရီးမီးယားလိဂ်က ကန်လို့ ကောင်းနေတုန်း။ ရေးကြပါစေ ဂျာနယ်တွေမှာ မျက်နှားဖုံးဆောင်းပါး တယ်ရှားနေတာကိုး။ ။ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၀၉) No tags for this post. Related posts No related posts.
> cartoon fromamonthly magazine No tags for this post. Related posts No related posts.
>Mar Mar Aye – 267
> ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ် အမှတ်(၂၆၇) ရွှေပြည်အေးရာပြည့်မာမာအေးမတ် ၈၊ ၂၀၀၉ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတဝါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊ ခုလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျန်းမာပါစေ၊ အသက်ရှည်ပါစေလို့ ဆုတောင်းချင်သလိုလို ဘာလိုလိုကြီး ဖြစ်နေတယ်၊ မာအေးရဲ့ ချစ်သော ပရိသတ်တွေက ဒီလို ဆုတောင်းပေးနေကျ ဆိုတာ သိပြီးသားပါရှင်၊ ယုံယုံကြည်ကြည် ခံစားရပါတယ်၊ ဒီအတွက် ကျေးဇူးတင်တယ် ဝမ်းသာပါတယ်နော်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂရုစိုက်နေဖြစ်တာတော့ ကြာပါပြီ၊ အဲဒီလို ဆုတောင်းချင်လာတာကတော့ အခုမှရှင်၊ စာတွေဖတ်လာလေ၊ အင်တာနက်တက်ကြည့်လေ၊ ဟိုမွှေသည်မွှေရှာဖွေလေ တွေရှိလေလုပ်နေတော့ ပြောပြစရာတွေလဲတပုံ ကြီးမကတော့ဘူး တပုံ့တပုံကြီးဖြစ်ဖြစ်လာပါတယ်၊ စာမှုရေးတဲ့ ကလောင်ကိုင်သောလက်ကလဲ အိန္ဒိယ မယ်တော်ကြီးတွေလို...
>Thit Kaung Eain with out her – Poem
> ကေခိုင် မရှိတဲ့ ကမ္ဘာ သစ်ကောင်းအိမ် မတ် ၈၊ ၂၀၀၉ ခြေသံပြင်းပြင်းတွေနဲ့ မင်းနင်းထွက်သွားတဲ့ ငါ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တစက္ကန့်ဟာ တကမ္ဘာ ရေပွက်ပမာဟာ သံသရာလို ပွက်လို့ကွာ ရှည်ကြာလွန်းလိုက်တာ။ မင်းမရှိတဲ့ ကမ္ဘာ သစ်တောတွေ ပြုန်းတီးလို့ တောမီးတွေ လောင်လို့ စီးပွားပျက်ကပ်တွေ ဆိုက်လို့ သင်္ကန်းကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ နင်းပြီး ဘုရားကို ထီးတော်တွေ တင်လို့ …။ တတိယကမ္ဘာ ရှိတယ် တတိယနိုင်ငံ ရှိတယ် တတိယအုပ်စုရှိတယ် မင်းကျ ဘာလို့ မရှိတော့တာလဲ။ မင်းမရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ကဗျာနဲ့ အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲရေးသမားဟာ ငါဖြစ်တယ်။ မင်းမရှိတဲ့ ကမ္ဘာ ဖြုန်းစရာ မိဘအမွေကလည်း မရှိတော့ ရှိသမျှအချိန်တွေကို ထိုင်ဖြုန်းရင်း ရောက်လာတဲ့နေ့တွေကို...
> နေပြည်တော်ရွှေတိဂုံ ထီးတင်ပြီဓာတ်ပုံသတင်းမတ် ၈၊ ၂၀၀၉ယမန်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ ဥပ္ပါတသန္တိ စေတီတော် ထီးတင်ပွဲတွင် တွေ့ရသော စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၊ ဇနီး နှင့် သားသမီး မြေးများ။ အဆိုပါစေတီတော်ကို ရန်ကုန်မှ ရွှေတိဂုံစေတီတော်၏ ပုံစံအတိုင်း တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ (photo: MNA) No tags for this post. Related posts No related posts.
> ဒေါ်စုနှင့်တကွ အကျဉ်းကျနိုင်ငံရေးသမားများဂုဏ်ပြု အစီအစဉ် နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးပြခန်းမှာ တင်ဆက်မည် မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၄ မတ် ၈၊ ၂၀၀၉ နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အိုစလိုမြို့၊ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးပြခန်းမှာ မြန်မာပြည်က လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တကွ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတို့ရဲ့ ဘ၀ကို သရုပ်ဖော်ပြီး တင်ဆက်မယ့် အော်ပရာ(ပြဇာတ်)တခုကို မတ်လ ၁၀ ရက်မှာ ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ မတ်လမှာ တော်လှန်ရေးသမိုင်းမှတ်တိုင်များနဲ့ ပြည့်နှက်နေပြီး၊ မတ်လ ၁၃ ရက်ဟာ မြန်မာပြည်လူ့အခွင့်အရေးနေ့အဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ်က စတင်သတ်မှတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၈၈ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနဲ့ လုံခြုံရေးတပ်သားများ အဓိကရုဏ်းမှာ ကျောင်းသား ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုမြင့်ဦးနဲ့ ကိုစိုးနိုင်တို့ ကျဆုံးခဲ့ကြတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၂၆)စံနမူနာပြပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထိန်လင်းမတ် ၈၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးများနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ်တွေ အတုယူနိုင်ဖို့၊ တိုင်းပြည်မှာ လူချွန်လူကောင်းတွေ အမြဲတမ်း ပေါ်ထွက်နေစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ မွေးနေ့ကို မြန်မာနိုင်ငံကလေးများနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော် စတင် ထူထောင်သူ၊ လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ၊ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရဲ့ မီးရှူးတန်ဆောင် စသဖြင့် ဂုဏ်ပုဒ်ပေါင်း များစွာနဲ့ ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၃၂ နှစ်ကျော်သာ ရှိပေမယ့် လေးစားစရာ၊ အတုယူစရာ ဂုဏ်ပုဒ်တွေ များစွာ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရိုးသားမှု၊ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု နဲ့...
>Than SOe Hlaing – Nargis Reporter Story 2
> (At Rangoon, Bo Aung Kyaw Street, after 3rd May 2008, Nargis) သတင်းထောက်တဦး ၏ နာဂစ်ဒိုင်ယာရီ -၂ သန်းစိုးလှိုင် မတ် ၇၊ ၂၀၀၉ ညအမှောင်နှင့် မုန်တိုင်း ည သန်းခေါင်ကျော် မအိပ်နိုင်ဘဲ လေတိုက်သံများကို နားစွင့်လိုက်၊ ဘယ်တော့ လေရှိန်လျော့သွားမည်လဲဟု မျှော်လင့်လိုက်နှင့် မိနစ်၊ နာရီများ ကုန်ဆုံးအောင် စောင့်နေရသည်။ ထိုသို့စောင့်နေရာတွင် တ၀ုန်းဝုန်းမြည်နေသည့် အိမ်ခေါင်မိုးသွပ်ပြားသံများက ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းလှသည်။ ဘယ်အချိန် ခေါင်မိုးလွင့်သွားမည်လဲဆိုသည့် စိုးရိမ်မှုလည်းပေါ်လာခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တမြို့လုံး မီးရောင်မရှိ အမှောင်ကြားထဲတွင် မုန်တိုင်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနေရသည်။ ကောင်းကင်ပြင်က မိုးတိမ်အရောင်ကြောင့်လား လေအရောင်ကြောင့်လားမသိ အနီရောင်ထနေသည်ကို မြင်ရ၏။ မြင်တွေ့နေရသည် အိမ်ရှေ့အိမ်များ၏...
>Students Movement in Burma (08)
> ကိုဗဟိန်းမှသည် ကျော်ကိုကိုအထိ (၈) ‘၁၉၅ဝ ခုနှစ်များ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု’အောင်ဝေးမတ် ၇၊ ၂၀၀၉ ‘ဒေါင်းပျိုထိုးဆွပ်၊ ဘယ်ညာခွပ်၍၊ လွတ်လပ်ရလေ၊ တို့တတွေသည်၊ အိုးဝေကျေးဇူးပါတကား’ ခွပ်ဒေါင်းသွေးနဲ့ ရင်းပြီးယူရတဲ့ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဟာ ရပြီးတာနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ ပြည်တွင်းစစ်မီးကြီး ကူးစက် လောင်မြိုက်ခံရပါတော့တယ်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ မတ်လ(၂၈)ရက်နေ့မှာ ဖဆပလ အဖွဲ့ထဲက အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ သခင်သန်းထွန်းရဲ့ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (ဗကပ) ဟာ လက်နက် ကိုင်တော်လှန်ဖို့ တောခိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၈ သြဂုတ်လမှာ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဦးဆောင်တဲ့၊ ညီညွတ်ရေးကောင်စီ ဖွဲ့တယ်။ ဒီအထဲမှာ တပ်မတော်၊ ဆိုရှယ်လစ်၊ ကွန်မြူနစ်၊ ပြည်သူ့ရဲဘော်တွေ ပါတယ်။ ညီညွတ်ရေးကောင်စီရဲ့ အတွင်းရေးမှူးက ဦးသိန်းဖေမြင့်၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ညီးညွတ်ရေးကောင်စီက ဦးနုရဲ့ အိုင်စီအက်စ် ဦးကာဇီ...
> မွေးနေ့ အရှင်ဉာဏိက မတ် ၇၊ ၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်။ အဲဒီနေ့က ကိုယ့်မွေးနေ့။ သူသူငါငါ ပြောရိုးစဉ်လာအရ ပြောရရင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ ဒီမွေးနေ့ဆိုတာကို သိပ်ပြီး လေးလေးနက်နက် ထားတတ်သူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်း အကြောင်းရှိပါတယ်။ ငယ်စဉ်ကအကြောင်းနဲ့ ကြီးမှ ကြုံရတဲ့ အကြောင်းတွေကလည်း မတူတတ်ဘူးပေါ့။ ငယ်စဉ်ကတော့ ကိုယ်မွေးဖွားကြီး ပြင်းခဲ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်။ ဟုတ်တယ်လေ။ ငယ်စဉ်ဘဝတလျှောက် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်သူတဦးတယောက်မှ မွေးနေ့ပွဲ ကျင်းပတယ် ဆိုတာကို မတွေ့ခဲ့ဖူးဘူး။ ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က သူတွေထဲက ဘယ်သူမှလည်း သူတို့ မွေးနေ့ဆိုတာကို စကားတရပ်အနေနဲ့ ပြောကြတာကိုလဲ မတွေ့ခဲ့မိဖူးဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ကိုယ့်ရှေ့က မွေးနှင့်ကြတဲ့သူ အများစုဟာ...
>Burmese Journal Digest – March 7th 2009
> ပြည်တွင်းက ဖတ်မိသမျှ ဂျာနယ် အပိုင်းအစ ဂျာနယ်ဂြိုလ် သာဂိ မတ် ၇၊ ၂၀၀၉ ယာဉ်ထိန်းရဲများ အရပ်ဝတ်ဖြင့် ဘတ်စကားများကို စစ်ဆေးမည်။ ဖေဖော်ဝါရီလသည် ဘေးကင်းကြောင်း မိုး/လေ ဦးထွန်းလွင်က ပြော။ ဒေါပုံမီး – ပလတ်စတစ်စက်ရုံက စတင်ခြင်းဖြစ်။ သရက်မှာ လူထုက ကိုယ်ပိုင်မီးသတ်ယာဉ် ၀ယ်မည်။ အင်းတော်ကြီးကန်က နွားများ ပလတ်စတစ်အိတ်စားပြီး သေဆုံး။ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များ သုဿန်မှာသာ ထားရမည်။ ရန်ကုန်တွင် နာရေးအသင်းပေါင်း ၁၈ သင်း စာရင်းအရ တွေ့ရှိနိုင်။ ဂြိုလ် ၅ လုံးပူး၍ ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကြုံကြမည်။ ရွှေပါရမီတောရက အခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းဖွင့်။ နာဂစ်ဖျက် ရေငန်တားတံမံ ၁၀ ခု ပြုပြင်ရန်လို။ တောင်ပြုံးက “စစ်ပြန်ပွဲတော်”...
>Thee Lay Thee & Colorful Anyeint to continue tour at all cost
> “မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ” သီးလေးသီးအဖွဲ့ အငြိမ့်ပွဲများ ဆက်ကမည် မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ မတ် ၇၊ ၂၀၀၉ ၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာလက ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ မတ်လကုန်တွင် ပြီးဆုံးမည် ဖြစ်သော သီးလေးသီးနှင့် ဆေးရောင်စုံ အဖွဲ့၏ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အနုပညာ ခရီးစဉ်တွင် နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်များ အဖြစ် မတ် ၇ ရက် နယူးယောက် ယူတီကာပွဲ၊ မတ် ၁၄ ရက် မြောက်ကရိုလိုင်းနားပွဲ နှင့် မတ် ၂၁ ရက် ဖို့ဝိန်းမြို့ ဇေတ၀န်ကျောင်း ပွဲစဉ် ၃ ခု စလုံးကို စီစဉ်ထားသည့် အတိုင်း မပျက်မကွက် ကပြ ဖျော်ဖြေသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ကြားသိရသည်။...
>Thit Kaung Eain – Sushi Poem 2
> ဆူရှီသမား လိပ်တဲ့ ကဗျာ – ၂ သစ်ကောင်းအိမ် မတ် ၇၊ ၂၀၀၉ အီရတ်မှာသမ္မတကြီး ဘုရ်ှဖိပ်နပ်ပေါက်ခံရတုံးကလည်း လိပ်ခဲ့တယ်။ ၀ါရှင်တန်ဒီစီမှာ ဘားရက်အိုဘားမားနဲ့ဒေါ်မေငြိမ်း ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တော့လည်းလိပ်ခဲ့တယ်။ လိပ်ခဲ့တယ်မြောက်ကယ်လိုရိုင်းနားမှာ လိပ်ခဲ့တယ်ဝက်စ်ဗာဂျီးနီးယားမှာ လိပ်ခဲ့တယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ လိပ်ခဲ့တယ် လိပ်တယ်ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ လိပ်တကောင်လိုယက်ကန်ယက်ကန် လိပ်တယ် လိပ်တယ်ဇက်ကြိုးဆောင့်ဆွဲခံရတဲ့ မြင်းတကောင်လိုပတပ်ရပ်ပြီး လိပ်တယ် လိပ်တယ်ငါးပိသွားကိုင်မိတဲ့ မျောက်တကောင်လိုပျာယာခတ်တောက်လောင်ပြီး လိပ်တယ် အလိပ်ထဲ လိပ်စာတွေပျောက်နေတယ်အလိပ်ထဲ တောတွေမှောက်နေတယ် လိပ်တယ်မိုင်ပေါင်းသောင်းချီဝေးတဲ့ အဝေးဖုန်းထဲက သားလေးပေးတဲ့ မွှေးမွှေးကို လိပ်တယ်ကောင်မလေးအေးရဲ့ညာနားရွက်နောက်က အသားပိုလေးကို လိပ်တယ်ပွဲလန့်ချိန် ဖျာလိပ်ထမ်းစောင့်နေတဲ့ငနဲတွေကိုလိပ်တယ် မျက်နှာဖြူတွေတိုင်းပြည်မှာမျက်ဖြူလန်ပြီးလိပ်တယ် မိုးလင်းထဲက စဉ်းစားမိတာ လိပ်ဖို့ပါပဲလိပ်မှာပဲ လိပ်မှာပဲငါ့ကို လာလာ မတားနဲ့ …အဲလက်စ်ရဲ့စားမှာပဲ … သီချင်းကို ကော်ပီလုပ်ဆိုရင်းလိပ်တယ် ဘယ် လျှောက်လည်နေသလဲလိုက်ရှာတော့ခွေးအိုကြီးတကောင်ရဲ့ ခြေရင်းမှာဝပ်ဆင်းနေတဲ့...
>Kalyar Mitay – Burmese currency is still strong
> ကာတွန်း ကလျာမိတေ – မြန်မာကျပ်ငွေက မာမာပဲ မတ် ၆၊ ၂၀၀၉ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Farmland occupied by the Junta
> လေးဒေါင့်ကန်ကျေးရွာတွင် ဓါတ်ငွေ့တူးဖော်ရန်အတွက်ဟုဆိုကာ လယ်မြေများသိမ်းယူ ၀င်းမြတ် မတ် ၆၊ ၂၀၀၉ လေးဒေါင့်ကန်ကျေးရွာရှိ ဘိုးဘွားပိုင် လယ်မြေ ၁၀ ဧကကို ဓါတ်ငွေ့တူးဖော်စမ်းသပ် ရန်အတွက်ဟုဆိုကာ အစိုးရက သိမ်းယူလိုက်သောကြောင့် လယ်ပိုင်ရှင်မှာ စိတ္တဇ ဝေဒနာ ခံစားနေရပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံသို့ တင်ပို့ခဲ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်က ရန်ကုန်တိုင်း လေးဒေါင့်ကန်ကျေးရွာ ကျူကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုအပိုင်ရှိ မြေ ၁၀ ဧကကို သဘာဝဓါတ်ငွေ့တူးဖော်ရန်ဟုဆိုကာ အစိုးရမှ တစ်ဧကလျှင် ငွေ ကျပ် ၂၀,၀၀၀ လျှော်ကျေးပေးကာ လာရောက် သိမ်းယူသွားသည်။ သိမ်းယူသွားသော လယ်ပိုင်ရှင်မှာ မြေဧက ၂၅ ခန့်ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင် ခဲ့သောလယ်မြေဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်မြေကွက်များ ထပ်မံ အသိမ်းခံရမည်ကို အစိုးရိမ်လွန်ပြီး စိတ္တဇဒေနာဖြစ်ကာ...
> မြန်မာစာနယ်ဇင်းသမားများကို မော်လဒိုက်ကျွန်းနိုင်ငံက ခိုလှုံခွင့်ပေးတော့မည်Minivan သတင်းဌာနမတ် ၆၊ ၂၀၀၉ မော်လဒိုက်ကျွန်းနိုင်ငံ သမ္မတ Mohamed Nasheed က မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ သော နိုင်ငံများမှ အတိုက်အခံ သတင်းထောက်များကို ခိုလှုံနေထိုင်ခွင့် ပြုမည်ဟု ပြောကြားလိုက်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံအပြီး ယင်းသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မတ Nasheed သည် ၂၀၀၈ အောက်တိုဘာလတွင် စတင် အာဏာရလာခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၉၁ က မစ္စတာ Nasheed သည် Sangu မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါရှိသော ၎င်း၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ အရေးအသားများကြောင့် ဖမ်းဆီး အကျဉ်းချ ခံခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လက မစ္စတာ Nasheed သည် ၁၄...
> ရင်ကွဲတေး ဒီဓါး မတ် ၆၊ ၂၀၀၉ အဖေရေ … နယ်နှင်ဒဏ်ခံနေရတဲ့ စံပယ်ရုံလေးတွေ မြို့တော်လမ်းမကြီးပေါ်က မကျန်းမာတဲ့နှလုံးသား တင်းကျပ်ပိတ်လှောင်ခံထားရတဲ့ အတွေးခေါ်လင်းပွင့်မှုတွေ အမှန်တရားအကြောင်း မပြောရဆိုတဲ့ ပညတ်တော်တွေ သမိုင်းဖြစ်စဉ် လမ်းကြောင်းပေါ် သံရည်ပူတွေ ဆွတ်ဖြန်း ငါ့စကားနွားရ အပြောအဆိုတွေက ကြီး ကျနော်တို့အနာဂတ်တွေလည်း ထမင်းသိုးဟင်းသိုးဖြစ်ခဲ့ပါပြီ (အကျဉ်းထဲကလာတဲ့ ကဗျာတပုဒ်) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Kyi Aung – Poem
> ကင်ပေတိုင် ကြည်အောင် မတ် ၆၊ ၂၀၀၉ မေ ၁ ၂- တိုက် ရိုက်စစ် ဖက်ဆစ် ညှဉ်းဆဲ ငရဲခန်း … အသဲ ငရဲမီးစာ ပြာဖြစ် ကြွင်းကျန် အလံမလှဲ ရဲစမ်းဟေ့ … (၁၉၄၃ ဂျပန်ဖက်ဆစ်ခေတ်အတွင်း ဗမာတော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦးရဲ့ မဟာမှတ်တမ်းကဗျာ) ကင်ပေတိုင် = ဂျပန်စစ်ပုလိပ်တို့ရဲ့ စစ်ဆေးညှဉ်းဆဲရေးဌာန) No tags for this post. Related posts No related posts.
>Biography of Mann Win Maung, president of burma 1957 (11)
> မန်းဝင်းမောင် အတ္ထုပတ္တိ အပိုင်း (၁၁) မှတ်စုမှတ်တမ်း မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ မြစ်ကြီးနားမှ ဘီဟားလား မြစ်ကြီးနားလေဆိပ်မှ ပါပါကို အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေးတပ် အမှတ် (၁ဝ၁) သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အမှတ် (၁ဝ၁) တပ်သည် မြစ်ကြီးနား မြောက်ဘက် စီတာပိုသံချိုင်းဟောင်း နေရာနားမှာ တပ်စွဲထား ပါတယ်။ ပါပါစစ်ပြေးအဖြစ် မြစ်ကြီးနားမှာ ရှိစဉ် စီတာပိုသံချိုင်းသည် ပကတိ အကောင်းပင် ရှိသေးသော်လည်း ယခု ဗုံးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီး နေပါတယ်။ မြစ်ကြီးနား တစ်မြို့လုံးလဲ ပျက်စီးနေပါတယ်။ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှ တွေ့ရသော မြင်ကွင်းသည် တစ်မြို့လုံး စစ်သားများ နေထိုင်သည့် ဖြူဖွေးသော ရွက်ထည်တဲများ သာဖြစ်တယ်။ အူပည့်အစုံသိုႛ … No...
> စာဖတ်သူတဦးနဲ့ စာပေဆွေးနွေးခြင်းမောင်စွမ်းရည် မတ်လ ၅၊ ၂၀၀၉ စာဖတ်သူတဦးဆိုတာ အခြားလူမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်မောင်တိုး (မိုးမိတ်)ဆိုတဲ့ ‘လူငယ်’ ကလောင်ရှင် တဦးပါ။ သူနဲ့မှ ဘာကြောင့် ဆွေးနွေးရသလဲဆိုတော့ တရပ်ကွက်တည်း အတူ နေကြတဲ့ သူချင်းဖြစ်လို့ပါ။ ဘာတွေ ဆွေးနွေးကြသလဲဆိုတော့ စာပေပြဿနာ တချို့ပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ရေးရသလဲဆိုတော့ ကိုခင်မောင်တိုးကပဲ ‘အဲဒါကလေးတွေ ပြန်ရေးပါလား၊ မဂ္ဂဇင်းထဲ ထည့်ရအောင်’ ဆိုလို့ပါ။ ဘယ်လိုများ ဆွေးနွေးကြသလဲဆိုတော့။ ဒီလိုပါ။ သူက ဆရာမောင်ခိုင်မာရေးတဲ့ ဟိုက္ကူပုံစံ ကဗျာတွေကို ဘယ်လိုသဘော ရသလဲ တဲ့။ ဒါနဲ့ ကျနော်က ပြန်မေးမယ်။ ‘ဘာဖြစ်လို့ မေးရတာလဲ၊ ဘာပြဿနာ ရှိလို့လဲ’လို့။ ဒီတော့သူက ‘ဒီလမဂ္ဂဇင်းတခုမှာ (မဂ္ဂဇင်းနာမည် ကျနော် မေ့သွားတာကို...
>March 4th 2009 – MoeMaKa Wednesday Weekly Radio
> ၂ဝဝ၉ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် မြန်မာပြည်က အကြွေရှားပါးမှု ပြဿနာ၊ သီးလေးသီး ၏ နယူးယောက် ဖျော်ဖြေပွဲ၊ ဖရီးမောင့်မြို့က နိဗ္ဗာန်ဈေး စသည့် မျက်မှောက်ရေးရာ သတင်းများ ဦးသန့်၊ မင်းသုဝဏ်၊ မောင်ထင် ရာပြည့် အထူးအစီအစဉ် ဦးသန့်၏ ဆောင်းပါး – လူကြီးနှင့်လူငယ် မင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာ – ဗိုလ်အောင်ကျော် နတ်ချင်း မောင်ထင်၏ ဆောင်းပါး – တော်လှန်ရေး No tags for this post. Related posts No related posts.
>Maung Yit – Democrat When Young, Become Replubican when Old
> ငယ်တော့ ဒီမိုကရက်၊ ကြီးတော့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် မောင်ရစ် မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ ဗမာပြည်မှာတုံးက ကြားဖူးတာက ငယ်တော့ ကွန်မြူနစ်၊ ကြီးတော့ အရင်းရှင်ဆိုလားပဲ။ လူငယ်ဘ၀က စွန့်စားလှုပ်ရှားခဲ့တုံးမှာ အဲဒီတုံးက ခေတ်စားတဲ့ ရဲရဲတောက်ကွန်မြူနစ် တော်လှန်ရေးသမားပေါ့ဗျာ။ အသက်ကြီးလာတော့ စည်းစိမ်ပစ္စည်းပြည့်စုံလို့ အငြိမ့်သားနဲ့ အရင်းရှင်ကြီးဖြစ်နေတယ်၊ ဖြစ်လာတယ်လို့ ပြောကြတာ ကြားဖူးပါတယ်။ တချို့လူတွေကိုတော့ ငယ်တုံးကတော့ သူပုန်၊ ကြီးတော့ မဆလကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောတာမျိုးလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီကို အမှီပြုပြီးတော့ ဒီစာကို ရေးပါတယ်။ ၂၁ ရာစုရဲ့ အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီသမိုင်းမှာ အခု ၂၀၀၈ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာဖြင့် အုတ်သြော်သောင်းနင်း အဖြစ်ဆုံးပါပဲ။ အမေရိကန်နိုင်ငံရေးစနစ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အာဏာလက်လွှဲပေးမှုကို ကမ္ဘာက သက်သေပြုကြရပါတယ်။ အာဏာရ ရှေးရိုးစွဲ...
>Bomb Blasts on MArch 3, 2009 in Rangoon, Aftermath
> မတ်လ ၃ ရက်က ဗုံး၊ လှည်းတန်းဘတ်စ်ကားဂိတ်ပျက်စီး မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ စည်ပင်ဝန်ထမ်းများက လှည်းတန်းလမ်းဆုံအနီးရှိ ဘတ်စ်ကားဂိတ်က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု၏ အပျက်အစီးများကို ရှင်းလင်းနေစဉ်။ အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများက မြို့ထဲက အင်းစိန်သွား အမှတ် ၁၀၇ လိုင်းကားအသေးပေါ်က ပစ်ချသွားသည်ဟု ဆိုကြသည်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Pakokku rumored with spreading of virus
> ပခုက္ကူမြို့တွင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါပိုးကြောင့် အထိတ်တလန့်ဖြစ် ၀င်းမြတ် မတ် ၅၊ ၂၀၀၉ ပခုက္ကူမြို့တွင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါဖြင့်သေဆုံးသွားသော ကိုရင်လေးတစ်ပါးကို အကြောင်းပြုပြီး မြို့ခံများအထိတ်တလန့်ဖြစ်ကာ ကာကွယ်ဆေးများသောက်သုံးခြင်း မျက်နှာဖုံးစည်းများ ၀တ်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော တပတ်ခန့်က ၁၄ နှစ် အရွယ် ကိုရင်လေးတပါး အပြင်းဖျားပြီး ဆေးရုံတင်ပို့ရာ ဆေးရုံရောက်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ဆရာဝန်များက ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့် ယူဆကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သောကြောင့် တယောက်စကား တယောက်နားဖြင့် ကြောက်လန့်ကာ ကာကွယ်ဆေးများသောက်သုံးခဲ့ကြသည်ဟု ပခုက္ကူမြို့ခံများကပြောသည်။ ပခုက္ကူမြို့မှ ပဲကုန်သည်တစ်ဦးက“ ကျနော်တို့မိသားစုဆရာဝန်က ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်ဆေးတွေ သောက်ခိုင်းလို့ သောက်ခဲ့ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတောင် ဆေးတွေဝယ်မရလို့ ရန်ကုန်ကညီမလေးဆီကို လှမ်းမှာရတယ်။ တချို့လူတွေဆိုရင် မျက်နှာဖုံးစည်းတွေတပ်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ကြတယ်” ဟုပြောသည်။ အရပ်သတင်းစကားများကြောင့်...
>Cartoon Maung Yit – Free Press is not Free
> Cartoon Maung Yit – Among so-called Media People, Pro-Junta Group & Oppositions, Free Press is not so free for the lesser kind March 4, 2009 No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 825 of 896«1...823824825826827...896»
>12 Dec 2009 - Burmese Journals Headlines Digest
>Burmese Senior Politician Thakhin Thein Pe marked his 94th birthday witih limitted guests
>Daw Suu gets Internet access
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ https://t.co/HAqivf5HCO https://t.co/0DN2QoGLrT about 8 minutes ago ReplyRetweetFavorite